Govt to findaway for equal economic opportunities at Chinshwehaw Economic Zone
(English text below) ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီးလျှင် ခရီးသည် ၂၅ဦးသာ တင်ဆောင်ရမည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ပြင်ပသို့ သွားလာနေသည့် ခရီးသည်များ ရောဂါကူးစပ်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီးလျှင် ခရီးသည် ၂၅ဦးသာ တင်ဆောင်ရန်အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချူပ်ရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း Power Eleven ကုမွဏီမှ သိရသည်။ ယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါစီးနှင်းသည့် ခရီးသည်များ နှားခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတပ်ဆင်၍ စီးနင်းရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် နှာခေါင်းစည်းမပါရှိသူများကို ယာဉ်ပေါ်တွင် ရောင်းချပေးခြင်း၊ အခမဲ့ပေးဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် လက်သန့်ဆေးရေကိုလည်း ယာဉ်အတက် အဆင်းတွင် အဖြစ်မနေထားရှိပေးရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ယာဉ်တစ်ခေါက် ပြေးဆွဲပြီးတိုင်း ယာဉ်ပေါ်တွင် ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကုမွဏီပေါင်း ၂၀ကျော်မှ ခရီးသည်များအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေလျက်ရှိပြီး...
The Yangon Regional Investment Committee approved 49 investment proposals during October 1 to December 18, 2019. Two of the approved proposals, worthacombined K2.045 billion, are from local investors while the rest are for foreign direct investments worth $80.722 million in total. The approved investments are expected to create...
The Microfinance Business Supervisory Committee has instructed microfinance companies not to forcibly ask for the repayment of loans and interests during the pandemic and urged them to reschedule the payment timeframe considering the situation where customers’ livelihoods and businesses are very vulnerable. “We don’t demand immediate payment. We know debtors...
18-Point Requirement for Integrated Fish-Chicken Farming
In October of last year, Myanmar Fisheries Federation called foraban on integrated fish-chicken farming, in which chicken are raised over fish ponds. However, the practice has yet to be terminated. As farmers have been unable to immediately separate fish and chicken sections on their farms, Myanmar Livestock Breeding...
MEXICO CITY China’s appetite for Mexican steaks and other cuts of beef is expected to increase more than 40 percent this year, in part due to disruptions caused by the coronavirus outbreak, according to Mexico’s top cattle association. Chinese buyers represent only about4percent of Mexico’s foreign beef sales but...
MTSH to give K200 dividends per share
MTSH၏ အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်(၂၀၀)နှုန်းဖြင့် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေပေးမည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အများပိုင်ကုမ္ပဏီ(MTSH)အနေဖြင့် ရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု (၂၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ခွဲဝေပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီကအသိပေးကြေညာထားသည်။ ကုန်ဆုံးခဲ့သော ၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာ(၃၀)ရက် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အဆိုပြုအမြတ်ဝေစုပမာဏကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ(၂၅)ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် မေလ(၇)ရက်အထိ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ထားသူများသာ အမြတ်ဝေစုခံစားခွင့်ရရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်(၂၀၀)နှုန်းဖြင့် ကျပ်(၇ဒသမ၇)ဘီလီယံကျော် ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်၂၀၁၉ခုနှစ် တွင် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်(၂၅၀)နှုန်းဖြင့် ကျပ်(၉ဒသမ၇)ဘီလီယံကျော် ခွဲဝေးပေးခဲ့သည်။ MTSH ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင် အမြတ်ငွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင်အမြတ်ငွေနှင့် အမြတ်ဝေစုထုတ်ပေးမည့်ရက်ကို ထပ်မံကြေညာပေးမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၁၆-၁၇ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် MTSH ရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်(၂၆၀)ဖြင့် ကုမ္ပဏီသမိုင်းတစ်လျှောက်...